Ezokuzijabulisa Net kuletha kuwe Wolf Cub. Lena isilwane evumelanisiwe Slots game online, ngocezwana twist kuso. Njengoba kungenzeka uye ukuyichaza manje, umdlalo mayelana cub yephakethe impisi. Nakuba lokhu cub zingavela cute, kufanele uqaphele njengoba kwakungase Paka bite okukhulu! Funda kabanzi mayelana lo mdlalo kusukela Ukubuyekeza ngezansi.
Ukuphila Ne Izimpisi e ijabulisa inthanethi Slots umdlalo
Lena Slots inthanethi umdlalo has 20 paylines fixed, 3 imigqa 5 reels. I cub-alpha pack impisi abukele kusuka ekhoneni sobunxele njengoba udlala. Ngemuva kuyinto iqhwa ihlathi yesehlakalo obekwe ebusuku. Ezinye Snowflakes ungase nakulokho falling kancane emhlabathini kanye
Le game has kokubili inani eliphansi kanye ephezulu ukubaluleka izimpawu. Izinga sidlala amakhadi A, J, K, Q, 9 futhi 10 yakha izimpawu ongaphakeme-value. Ukuze izithonjana okusezingeni eliphezulu zenani, une izimpawu isilwane ezifaka ibhere, ikati ￼wild, iphiva, isikhova kanye Wolf Cub.
Wena ubuye ube isithonjana scatter imelelwa Moon Okugcwele. A Snowy Wolf Phrinta limelela uphawu Wild. Uphawu zasendle ngeke ususe zonke ezinye izimpawu phezu itolitji, ngaphandle isithonjana chitha. Ngokufaka esikhundleni ezinye izimpawu, kuzothuthukisa amathuba akho kokwehla ngokuwina inhlanganisela.
IFree osebenzisa Ibhonasi Isici Of Lokhu Online Slots Game
Wolf Cub has a Mahhala osebenzisa ibhonasi isici icushiwe lapho ukwazi umhlaba ubuncane ezintathu Full Moon chitha izimpawu. Labo itolitji ukuthi abe lama- chitha imifanekiso emithathu kuwo, Kuzobe sekuba spin. Lokhu kuyoholela ekuthuleni eziningi osebenzisa free kokuba wethule. Uma ufaka inombolo osebenzisa free ingamboziwe uyoba angayivuza Imininingwane khulula osebenzisa umklomelo.
Ungase futhi wenze kusebenze i-Isici Blizzard uma kukhona kushe izimpawu ezifanayo ku esondweni elilodwa. Ngakolunye itolitji, ungase ubone ezinye izimpawu ezifanayo. Njengoba itolitji spin lezi izimpawu kanye isithonjana zasendle, ngeke bese ucondzanisa ukuze uthole wena inhlanganisela ngokuwina.
Kuyinto yakhelwe kahle Slots game online ihluzo okukhulu futhi izithombe. I-soundtrack Kuyathokozisa uyakufanelekela izinga okusezingeni Gameplay okuhle. Ungathola i RTP ka 96.34%, okusho ukuthi uma esigxotsheni £ 100 niyozuza wenkokhelo ye £ 96,34.